Aza mosarena: vaky sambo sy ny zavakantony | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | mpanakanto, Inspiration, maro
Don's Starve dia lalao tafavoaka velona amin'ny fomban'ny Minecraft, na dia tsy mitovy amin'ny an'ity iray ity aza izy amin'ny fomba hafa iray hafa tsy mitovy amin'ny fahitana azy izay izao tontolo izao nofinofy sy ireo endri-tsoratra hafahafa toa voasintona amin'ny tanana izy ireo.
Io antony io ihany no antony hanolorantsika toerana kely sanganasan'ilay fanitarana vaovao antsoina hoe Shiprecked izay mitondra ny mpilalao any amin'ny tontolo tropikaly. Tontolo iray misy litera vaovao, biome, zavaboary, mekanika ary misy vokany vaovao aza. Zavakanto hita maso amin'ny sary mialoha sy sanganasa isan-karazany ataon'ny mpanao sary miandraikitra ny famoronana an'ity tontolo manodidina ny protagonist ity.
Soa ihany izahay fa afaka niditra sary vitsivitsy mampiseho ireo hevitra voalohany miaraka amina litera tsirairay avy izay miseho amin'ny endriny farany amin'ny lalao video.
Miatrika lalao fanta-daza amin'ny fitarihana isika tena endri-tsoratra Tim Burton na antsoina hoe «Burtonesque» (fanakaikezana). Ka ny fampahafantarana azy ireo amin'ny tontolo tropikaly kokoa dia tsy mora araka ny fahitana azy, noho izany dia tokony hitandrina izy ireo mba tsy hahavery ilay fotokevitra manokana an'ny Aza Mosary. Na ireo endri-tsoratra teo aloha aza tsy maintsy nikitika kely mba haharaka ilay fanavaozana vaovao.
Etsy ankilany, ny hafa dia nampidirina ary koa ny «Quaken» izay araho io fomba manokana io fa mahitsy mankany amin'ny Ranomasina atsimo. Azonao atao ny mahita ny fitoviana eo amin'ny sary sy ny vokatra farany mba tsy hisy fahasamihafana betsaka ihany koa.
Ny kisarisary ho an'ny solaitrabe voalohany dia voavaha tamin'ny fomba nampiasana ny rojom-pifandraisana izay nihinana ny toetra tsirairay amin'ny manaraka mahery setra indrindra. Ny kinova farany dia nizotra tamin'ny vokatra hafa araka ny ahitanao ny horonantsary YouTube.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny kanto mahafinaritra an'ny Aza mosarena: vaky sambo
"Church Metal" fametrahana goavana nataon'i Edward Tresoldi